umthwalo kubahlinzeki umshayeli sezimoto ifaniswe ne ukucindezeleka olutholwa umshayeli we Interceptor e DogFight. Akukho lutho isimanga ukuthi automakers ukuboleka onjiniyela ayekanye nawo baveze ezinye izixazululo lobuchwepheshe ukwandisa isivinini izinqumo ezimweni ezibucayi.
Kuyinto akhathalela ngokuyinhloko ulwazi Ergonomics. Ikakhulukazi, muva abakhiqizi uhola embonini yezimoto ngokwethukela kusetshenziswa kwelivi phezu somoya phakathi kumadivayisi eyinhloko ibekwe iphaneli dash.
Njengoba sekunama-ekuphonsweni, futhi izindiza leSupersonic ikakhulukazi, isikhathi esabelwe umshayeli ukuba enze isinqumo DogFight, kwehle kakhulu. Lapho fighters ezimbili flying maqondana nomunye, ibanga elibahlukanisile kuyehla amakhulu kwamamitha ngesekhondi ngalinye. Kulokhu, bandisa kufanele ulandele ukundiza ezifana izinkomba ezibalulekile njengoba ukuphakama, enyakazayo futhi ngombala, ukuze ugweme kokushayeka phansi noma faka imoto ibe spin engalawuliwe. Ngo impi ibambene ngezihluthu, njengoba kuboniswa ezimpini Emashumini amahlanu eminyaka edlule, bandisa akazange abe nesikhathi ukugada petrol, okuholela iphesenti kunalokho enkulu ukulahleka kungenxa yokuthi amathangi Corny kaphalafini iphelile.
Ilokhu wehlise amehlo ami kudeshibhodi, ngaphandle isimo emoyeni, sasiwumsebenzi kube nzima, ikakhulukazi uma ishintsha zonke mzuzu. Lesi sinqumo sithathwe okokuqala, ngokusho kwabanye imithombo, eSweden ngo-Saab, futhi ngakolunye - eU.SSR (the izimfihlo eziphathelene nokuthandana kufika ithuba lika-50s kanye 60s akazange avumele ukuba bathi ngubani ngaphambili). Kunoma ikuphi, abaklami wesikhathi Kwakungelula. Projection phezu somoya indiza kwenziwa esebenzisa uhlelo eziyinkimbinkimbi optical, isiginali kusuka CRT, kunalokho nzima. Noma kunjalo, umphumela Asizisoli neze ngesinqumo esasithatha.
I ucwaningo lokuqala Avtosrtoiteley
Ngo-1988, inkampani American "Oldsmobile" Wethule eseyintsha. "Ketlass Syuprim" kwaba umshini ezinhle, enhle futhi enhle, kodwa zako ikhonza njengesithunywa wesizinda for the "chip" main. Ngokokuqala ngqá belingana torpedoes ezivamile kwelivi ku isiphephelo somoya emotweni yasetshenziselwa, akhiqizwa chungechunge. ngokushesha amakhophi amahlanu wathenga abahleli "Indianapolis 500" izinhlanga, okwenza i-oda ukhetho "Convertible" umzimba - ngokusobala ukuze emisha kangcono kwakusobala kuwo wonke umuntu. Eqinisweni, ngezindinganiso namuhla lethu, isibonisi kwaba ngaphezu nesizotha. Isikhathi ezibaluleke kakhulu kwakubonakala Isivinini kwelivi ungene somoya (njalo bahlawuliswa ngokwephula ngokweqile), futhi ngaphandle-ke, umshayeli ongabona imvamisa linemibhikisho, vula amasignali, emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni lokushisa futhi kwenye pair of nemingcele - konke ngombala owodwa. Kodwa sase siqalile, futhi ngokushesha isibonelo "Oldsmobile" kulandelwe BMW, Honda, Citroen, Nissan kanye Toyota.
Okunye impumelelo lobuchwepheshe samasosha zezimboni eziyinkimbinkimbi nakho nesithakazelo izinkampani auto. Ngokwesibonelo, amadivayisi embonweni wasebusuku zikufakazela wusizo ukushayela ebumnyameni. Projection phezu somoya isithombe infrared okuyinto kwenziwe ngendlela yokuthi umshayeli batshengise ngokuhlanganiswa into yangempela ngalé yakhe ghostly okwesibhakabhaka, kuyasiza ukugwema ukungqubuzana kokuvela a kungazelelwe phezu endleleni abantu nezilwane. izinhlelo ezinjalo babe onobuhle eziningana amafemu "Honda", "Cadillac" futhi "Toyota". Kuyinto umbono obaluleke ngokukhethekile lezinto umngcele lapho yokupaka, ikakhulukazi uma isithombe namanje "ukukhuluma", futhi ibanga isithiyo kukalwa neyaziwayo ngqo phambi kwamehlo somshayeli. Kodwa lokhu ezingeni ezahlukene ubuchwepheshe, okuyinto engenakwenzeka ukufeza ngaphandle ubuchwepheshe bama-computer.
kwelivi ejwayelekile kwi umshini wokubonisa izinga lejubane somoya namuhla kubonakala umsebenzi elula, solution yayo itholakala, ngisho workshop encane ekubhekaneni imoto ingaphakathi restyling. A ubuchwepheshe eziphambili ngempela zidinga kudalwa ezahlukene ngokuphelele, sibi nakakhulu ulwazi ukujula emkhakheni umbono ngenkathi ushayela. Namuhla, inani kubaluleke kakhulu ngendlela ethathwe GPS, kodwa Friend isikhathi isheduli kwenza kube nzima ukusebenzisa uhlelo. Udinga ukumisa futhi ucabangele e-ikhadi. Projection phezu Navigator somoya ivumela ukugxila endleleni, ebuka esibukweni nokwenza izinqumo acishe kweso.
Ubuchwepheshe kanye umsebenzi
Siyofika isishayo eyinhloko "isibonisi esobala" - ezinombala ofanayo yayo - ukuthi ngempumelelo unqobe ngemva ukwamukelwa mass ubuchwepheshe of kwekhulu lamashumi amabili - okungukuthi, ongaphakeme-amandla lasers, diodes ukukhanya-likhipha, uketshezi amadivayisi luketshezi plasma ukubonisa panel. Zonke lezi impumelelo intuthuko kwezobuchwepheshe wenza kwenzeka ukwakha, non-amandla kudivayisi compact olunzulu futhi ezingabizi, kulula ukufaka yimuphi izimoto.
isibonisi isimiso uqobo ulula. Idatha kusukela izinzwa efakwe ISIZINDA kanye lokubolekwa, maphakathi Imininingwane babuthanela kudivayisi eyafakwa wokudlala. Kusikrini yayo kwakheka isithombe, okuyinto, ngemuva ukukhanya kwalo yanikezwa i lens uhlelo optical, bese - the esobala polymer ifilimu anamatheliswe phezu ingilazi.
Ngokuvamile, zikhona izinhlelo ezinikeza isibonisi ezinhle ukufundwa olungenziwa uyifake wena. Akubalulekile ukuqonda sina imoto izikimu. Ngokwesibonelo, idatha isivinini ingatholakala nge GPS-Itilosi, futhi bayoba abaluleke nakakhulu ngoba, ngokungafani tachometer ezivamile, musa kuxhomeke ubukhulu lamasondo. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi projection phezu somoya kuyoba eliphezulu kuphela uma kuba ephelele (noma cishe ngakho) isimo. Uqhekeko, imihuzuko and chips azivumelekile. Futhi-ke, kuba lula ukufaka uhlelo esinjalo, ezibizayo kuwufanele. Ukuthembeka kanye nekghono zisasebenza amashabhu ezikhethekile.
Toyota Soarer: izinto ezithakazelisayo kakhulu mayelana izizukulwane ezine imodeli kanye ethandwa
Studless ebusika amathayi: ukubuyekezwa kanye abakhiqizi
Coffeeshop Inkampani, "Vienna ikhofi endlini": amakheli, amamenyu
"D-panthenol" (wamafutha): lokho kusiza, yokusetshenziswa, incazelo izidakamizwa, abstract
Izinhlobo sezulu. Izinhlobo sezulu eRussia: etafuleni
Isiqalisi Grenade "The Fly" - esinamandla
Izimbali ezikhulayo kule abamba ukushisa njengoba ibhizinisi. Ibhizinisi uhlelo imbali ukutshalwa